Ny wallpapers tora-pasika tsara indrindra ho an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Andro vitsy lasa izay dia nandefa fidirana miaraka amin'ny ny fiaviana 50 tsara indrindra ho an'ny Mac. Teo amin'izy ireo dia nisy tora-pasika sasany, saingy navela teo amin'ny faniriana hanao akanjo bebe kokoa aho ary indrindra amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny hatsiaka ataony. Tsy hoe tsy tia ny hatsiaka aho fa tena tsy tiako. Ny zavatra tiako dia ny lanezy sy ny fararano. Na izany aza, mitranga amiko fa rehefa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny taona isika dia mahatsiaro betsaka momba ny tora-pasika, ny ranomasina, ny fasika ary ny andro lava. Fa rehefa fahavaratra aho dia tsaroako ny tendrombohitra sy ny hatsiaka ary ny alina izay matory tsara. Na izany na tsy izany, avelao aho hametraka wallpapers vitsivitsy miaraka amin'ny lohahevitra amoron-dranomasina mba hahafahanao mandeha mieritreritra ny halehanao amin'ny fahavaratra manaraka.
1 Hammocks eny amoron-dranomasina
2 Masoandro milentika amoron-dranomasina
3 Ny ranomasina
4 Ny ranomasina toy ny landy
5 Manasongadina ny fasika
6 Andao hiverina any amin’ny paradisa
7 Lafo ho an'ny fitoniana
8 Ny toerana miafina amin'ny tora-pasika
9 Ny alina manoloana ny ranomasina
10 Saripika tora-pasika sasany ho an'ny Mac-nao
Hammocks eny amoron-dranomasina
Aoka isika hanomboka mafy. Handeha hanonofy tora-pasika paradisa isika izay tsy mahita afa-tsy ranomasina misy rano mangatsiatsiaka, hazo rofia napetraka stratejika izay ihantonan'ny fandriana roa. Ny iray ho anao ary ny iray ... ho an'izay fidinao. Mandainga amin'izy ireo ianao ary azoko antoka fa saika ny olana rehetra dia tokony hiala ho azy. Tsy haiko na efa nanao an'izany ve izy, fa tsy voavidy vola izany fahatsapana fahatoniana izany, tsy mihaino afa-tsy ny fimenomenon'ny ranomasina. Kandidà toerana tsara ho an'ny fahavaratra 2022.
Masoandro milentika amoron-dranomasina
Ok, ity sary ity dia azo antoka fa hapetraka hanome fitsiriritana ambony indrindra. Fa izay no atao hoe, mifidy sary izay rehefa hitanao dia mitondra anao any amin'ny toeran-kafa ianao ary mahatsapa ho toy ny tena any. Rehefa manokatra ny Mac ianao ary mahita an'ity wallpaper ity, aza miditra dia tsy mila afa-tsy ny hankafy izay ataonao. Nofy, mety ho tanjona ny mandry eo amin'io fasika io amin'ny filentehan'ny masoandro mijery ranomasina. Sahala amin'ny hantsana foana izay nalehanao tamin'ny fivoy. Ankafizo, satria matetika ny filentehan'ny masoandro dia fohy, ny tsara dia ny fiposahan'ny masoandro dia ho avy aoriana.
Raha ny ranomasina no tena tianao indrindra amin'ny tora-pasika dia miasa tsara ity sary ity. maneho ny tena ilaina ny tora-pasika. Rano mazava kristaly izay ahafahanao mandro rehefa mafana ny andro. Tsy haiko ny momba anao, fa ny ahy, matetika rehefa mandro aho dia tsy mirona lavitra loatra amin'ny morontsiraka. Manome voninahitra ahy ny ranomasina avo. Aleoko mandeha an-tsambo aloha. Mazava ho azy miaraka amin'ny rano toy ny amin'ity sary ity, milamina.
Ny ranomasina toy ny landy
Ity wallpaper ity dia iray amin'ireo tiako indrindra. Tiako ny sary ary ny iray amin'ireo sary tiako indrindra dia ny fampirantiana lava. Izany hoe, avelao hisokatra ela ny fanakatonana ary amin'izay dia miharihary kokoa ny hetsika. Rehefa manao izany amin'ny rano ianao dia lasa toy ny mijery landy. Rehefa manao izany eny amin'ny lanitra ianao, dia mihalava ny rahona, toa mivelatra. Raha atambatrao ireo zavatra roa ireo dia zavatra mahagaga sisa tavela. Raha manampy masoandro ianao dia manana an'ity wallpaper nofinofy.
Manasongadina ny fasika
Raha any ambadika any toa milamina sy milamina ny zava-drehetra taloha, ny any ambadika any dia ny mifanohitra amin'izany. Te-hanambatra azy ireo aho mba hahitana ny fahasamihafana misy eo amin'ny iray sy ny iray. Noho izany dia azonao atao ny mahita ny fomba fanovana tsotra ny mari-pamantarana fakan-tsary ahafahanao manafina ny halemem-panahy na ny haratsiana. Manoloana an'io lafin-javatra io, te-hanasongadina ny masoandro sy ny lokon'ny lanitra amin'ny filentehan'ny masoandro ianao. Fa ny tany sy ny vato dia toa avy any Mars. Toerana ivelan'ny tany, nefa misarika ny sain'ny maro. Tena tsara ho an'ny Mac.
Andao hiverina any amin’ny paradisa
Taorian'ny nahitako tany saika maina na dia mahita ranomasina aza isika, dia mametraka iray izay hamerina anao amin'ny reveries. Toerana izay tiantsika rehetra hisy amin'izao fotoana izao, azo antoka. Io lokon'ny rano io, io fasika tsara io ary ireo hazo rofia izay manondro toerana maloka, dia tonga lafatra mba hahafahana mandany ora tsy manao na inona na inona. Izany no lazain'ity sary ity amiko. Manoro fotoana malalaka, fialan-tsasatra, tsy misy adin-tsaina amin'ny asa na COVID. Toa ao anatin’ny tontolo mifanitsy izay tsy misy olana isika. Zavatra ilaina indraindray izany.
Lafo ho an'ny fitoniana
Tsy fantatro raha tokony hampiasaina ho wallpaper Mac ity sary ity na apetraka eo amin'ny latabatry ny fandriana ao amin'ny efitranoko. Mahita azy io ary mahatsiaro ho tony amin'ny lafiny rehetra. Mety hapetrako eo amin'ny talantalana izany fa eo ambony latabatra ao amin'ny biraoko koa. Ka rehefa misy singa ivelany na anatiny mahatonga adin-tsaina na tebiteby, azo antoka fa mijery ity sary ity miaraka amin'ireo rano mangarahara ireo dia hampiadana ahy.
Raha toa ka toa tsy mety aminao ilay teo aloha mba hialana sasatra dia avelako eto ambany ity iray ity. Fomba fijery hafa mitovy. Rano madio sy tony, fasika kely. Fa ambonin'ny zavatra rehetra, ny rahona fotsy amin'ny farany. Izy ireo no protagonista. Rahona toy ny landihazo. Malefaka, tony ary miala sasatra. Sary iray azo antoka fa ho ezahinao hojerena ny endriny amin'ny Mac.Efa lazaiko anao mialoha izany toa tsara be ilay izy.
Ny toerana miafina amin'ny tora-pasika
Efa notsapaiko tamin'ny Mac ihany koa io fiaviana io, raha ny marina dia efa notsapaiko daholo izany alohan'ny hametrahana azy eto. Efa nanandrana maro hafa aho fa nariako satria tsy nety tsara, na nanarona sary masina izy ireo na tamin'ny toerana sasany teo amin'ny efijery dia afangaro tamin'ny rakitra. Na izany na tsy izany, ity iray entiko ho anao izao dia afaka milaza aminao aho fa iray amin'ireo tsara indrindra. Manana ny zava-drehetra mampahatsiahy antsika fa ny tora-pasika dia tsy fialan-tsasatra sy fitoniana fotsiny. Manana safidy ho an'ny aventure ihany koa izahay. HO AN'NY fantaro ireo toerana miafina izay tsy fantatry ny vitsy, na dia lasa goavambe aza izy ireo taty aoriana, fa zavatra raiki-tapisaka amin'ny karazana misy antsika izany. Masoandro, zohy, rano ary fasika ... Inona no miandry antsika ao anatiny?
Ny alina manoloana ny ranomasina
Any amin'ny toerana amoron-tsiraka sasany dia afaka mahita toerana toy izany isika. Tora-pasika, masoandro mody manonofy ary trano fisakafoanana tsara. Raha ambonin'izany dia eo afovoan'ny rano ilay toerana, misy fomba fijery mahavariana satria eny an-tampony dia nanana andro feno rahona mahazatra ianao saingy tsy voarakotra tanteraka, azo antoka fa tsy misy mety ho diso. Tsy maintsy mankafy ny fomba fijery, ny sakafo ary indrindra ny orinasa ianao.
Saripika tora-pasika sasany ho an'ny Mac-nao
Ireto misy wallpaper hafa mitovy lohahevitra. Ny tora-pasika ary inona izy ireo fiovaovan'ny etsy ambony. Manantena aho fa amin'ireo rehetra ireo dia misy iray tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny wallpapers tora-pasika tsara indrindra ho an'ny Mac